I-Pangoo Jet I-A3 UV iphrinta ephrintiwe China Manufacturer
Incazelo:I-Printer UV ye-Roland UV,Iphrinta ye-Raster ye-UV engu-600 600,Iphrinta ephrinti ye-Ricoh UV
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Iphrinta ye-UV ephepheni > I-Pangoo Jet I-A3 UV iphrinta ephrintiwe
I-Pangoo Jet i-A3 UV iphrinta ephrintiwe ephezulu enezintambo ezinomsebenzi omuhle, isikhathi eside usebenzisa impilo kanye nekhwalithi ephezulu. Umshini wokunyathelisa we-Multi-functional Flatbed UV A3, osetshenziselwa kakhulu ipulasitiki, insimbi, ngokhuni, acrylic, ingilazi njll. Kulula ukusebenza, unikeze ukwesekwa kwamakhono online.
Isikhathi esijwayelekile sokulethwa kwezinsuku zokusebenza ezingu-1 kuya kwezingu-3. Ngakho-ke, ngaphansi kwesimo esijwayelekile, kuyoba izinsuku ezingu-5. Ithimba lobuchwepheshe lizohlinzeka ngesiphakamiso esihle kanye nomshini ofanele kakhulu kumaklayenti. Isampula yamahhala izotholakala, ungasithumela isithombe futhi sizokuphrinta njengoba udinga isampula. Umthengi ovakashelayo.Uma ubonisa isithakazelo kuphrinta, sizokukhombisa embonini futhi sikuqondise ukuthi ungasebenzisa kanjani i- Ricoh UV Printer Flatbed .
2. I- Roland UV Printer Flatbed ingafakwa nge-Height Detecting sensor, ukuvikela ikhanda lokuphrinta;
3. Iphrinta ye-UV esheshayo ye-600 600 Inkinobho yekhamera ineNenzwa yokuThola iNgeya, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
I-Printer UV ye-Roland UV Iphrinta ye-Raster ye-UV engu-600 600 Iphrinta ephrinti ye-Ricoh UV I-Printer ye-Chocolate I-Best Printer ye-UV I-Printer ye-CD 2014 I-UV Flatbed Printer Roland I-Mini Flat Printer ye-UV